Asa tanana 15 mora ho an'ny ankizy | Asa tanana
Asa-tanana 15 mora ho an'ny ankizy
Isabel Catalan | 05/10/2021 09:00 | asa-tanana, Asa-tanana ho an'ny ankizy
Sasatry ny ao an-trano ve ny kely ka tsy mahalala izay hatao mba hiala voly? Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia ho hitanao 15 asa tanana mora ho an'ny ankizy izany dia vita amin'ny jiffy ary ahafahan'izy ireo mankafy be dia be amin'ny fizotry ny famoronana ary avy eo, rehefa vita ny asa tanana ary afaka milalao miaraka aminy.
Mba hanaovana ireo asa-tanana ireo dia tsy mila mividy fitaovana maro ianao. Raha ny marina, raha mpankafy asa tanana ianao, dia azo antoka fa hanana maro amin'izy ireo ao an-trano avy amin'ny fotoana taloha, na dia azonao atao aza ny manararaotra fitaovana fanodinana mba hanaovana azy. Aza adino izany!
1 Superhero mahery miaraka amina kitay sy karda
2 Mahatsiaro piozila ho an'ny ankizy
3 Famantarana ny bokotra varavarana misy hafatra
4 Ravaky ny renirano krismasy hatao amin'ny ankizy
5 Fanodinana asa tanana ho an'ny Krismasy. Snowman
6 Sifotra baoritra hatao amin'ny ankizy
7 Easy piggy banky fanodinana tavoahangy ronono vovoka na mitovy amin'izany
8 Ny endriny géometrika hamehezana, vita amina taratasy taratasy fidiovana
9 Kara-lolo sy lolo taratasy crepe
10 Vilany mpikarakara pensilihazo ho an'ny ankizy
11 Kitapo lamba handoroana ditin-kazo manitra
12 Tsinontsinona voaravaka amin'ny fahavaratra
13 Kilalao voaverina: ny sodina majika
14 Saka mpiandry pensily
15 Lalao Hoops
Anisan'ireo asa-tanana mora ho an'ny ankizy no ahitanao izany tsotra mahery fo vita amin'ny kibay sy baoritra. Ny fitaovana ilainao dia tsorakazo popaosy, baoritra ary marika marika.
Ny zavatra tsara amin'ity asa tanana ity dia azonao atao ao anatin'ny minitra vitsy dia ho afaka milalao miaraka aminy ny ankizy. Ho fanampin'izany, azo atao manokana izy io amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo loko ary na ny taratasin'ilay maherifo aza miaraka amin'ny fiandohan'ny anaran'ny zaza, ohatra.
Raha te hahalala ny fomba hanaovana azy ianao dia aza adino ny lahatsoratra mahery fo vita amin'ny kibay sy baoritra.
Iray amin'ireo lalao ankafizin'ny ankizy ny fialamboly dia ny piozila, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny be pitsiny indrindra. Ireo piozila vita amin'ny lamba toy ny tsapa dia tonga lafatra amin'ny fiasana amin'ny fahaizan'ny moto sy ny fahatsapana, izay mety indrindra ho an'ny ankizy hampivelatra ny fahaizany misaina sy ara-batana.
Ankoatra izany, mora atao ity piozila ity ary azonao atao ny manao sary isan-karazany anaingoana azy. Ianao dia mila lamba tsapa, kofehy amboradara, fanjaitra matevina ary velcro adhesive, ankoatry ny hafa.
Raha te hianatra ny fomba anaovany azy tsikelikely ianao dia jereo ity lahatsoratra ity Mahatsiaro piozila ho an'ny ankizy.
Famantarana ny bokotra varavarana misy hafatra
Ity dia iray amin'ireo asa tanana mora azon'ny ankizy azonao atao amin'ny fitaovana vitsivitsy izay efa anananao ao an-trano toy ny baoritra miloko, taratasy crepe, hety, lakaoly ary marika.
Amin'ireo fitaovana rehetra ireo dia azonao atao ny mamorona izany famantarana hafatra mihantona amin'ny bokin'ny efitranon'ny trano. Te hahafantatra ny fomba hanaovana azy ve ianao? Topazo maso ny lahatsoratra Famantarana ny bokotra varavarana misy hafatra.
Ravaky ny renirano krismasy hatao amin'ny ankizy
Ankoatry ny maha iray amin'ireo asa-tanana mora ho an'ny ankizy dia izy io ihany koa dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra satria azo ampiasaina ho toy izany firavaka hazo krismasy na ho karatra fiarahabana ho an'ny olona manokana mandritra ireo daty ireo.
Tsotra be izany ka na ny kely indrindra amin'ny fianakaviana dia afaka mandray anjara amin'ny fanomanana azy. Mba hanaovana azy dia takelaka baoritra, pensilihazo, marika mainty, baolina miloko ary zavatra hafa hitanao ao amin'ny paositra ihany no ilainao. Ravaky ny renirano krismasy hatao amin'ny ankizy.
Ny iray amin'ireo asa tanana mora indrindra ho an'ny ankizy ary tena mampiavaka ny lohahevitra Krismasy azonao atao dia ny a baoritra snowman.
Mila horonana taratasy foana ianao, fingotra vita amin'ny foam, pom pom, tsapa, marika, ary kojakoja vitsivitsy hafa. Ny valiny dia tena tsara, na handravahana ny efitranon'ny ankizy na hampiasana azy io ho kilalao hampiala voly ny tenany mandritra ny fotoana kelikely.
Raha te-hahita ny dingana rehetra amin'ny fanaovana azy ianao dia aza hadino ny lahatsoratra Asa tanana haverina amin'ny laoniny ho an'ny Krismasy: Snowman. Azo antoka fa ho tsara tarehy aminao!
Sifotra baoritra hatao amin'ny ankizy
Ity sifotra kely ity dia iray amin'ireo asa tanana ankizy haingana indrindra atao. Tena tsara ho an'ny ankizy kely ny mianatra manao asa tanana irery ary manana fotoana mahafinaritra be amin'ny fampivelarana ny eritreriny.
Ny baoritra ilaina amin'ny fanaovana an'io sifotra io. Azo antoka fa manana maro ao an-trano ianao! Te hahita ny fomba anaovanao azy ireo ve ianao? Ao amin'ny lahatsoratra Sifotra baoritra hatao amin'ny ankizy ho hitanao ny fizotrany rehetra.
Easy piggy banky fanodinana tavoahangy ronono vovoka na mitovy amin'izany
Ankehitriny rehefa manomboka ny taona vaovao dia fotoana mety izao hampianarana ny ankizy hitahiry ny karamany mba hahafahan'izy ireo mividy trinket sy kilalao mandritra ny taona.
Ny fomba mahafinaritra anaovana azy dia amin'ny famoronana ity piggy banky misy tavoahangy ronono vovoka voaverina. Izy io dia iray amin'ireo asa-tanana mora ho an'ny ankizy izay ilanao fitaovana vitsivitsy: ny sambo, volon'ondry kely, cutter ary silika mafana.
Raha te hahalala ny fizotry ny famokarana an'ity piggy bank ity ianao dia aza hadino ny lahatsoratra Easy piggy banky fanodinana ronono karazana vovoka afaka.
Ny endriny géometrika hamehezana, vita amina taratasy taratasy fidiovana
Te hanampy ny ankizy kely handravaka ny fitaovany any an-tsekoly amin'ny fomba mahafinaritra sy am-boalohany ve ianao? Avy eo jereo ny paositra Endrika Geometrika hamehezana ny horonana taratasy fidiovana satria izy io dia iray amin'ireo asa tanana mora azon'ny ankizy azonao atao amin'ny flash miaraka amina fitaovana vitsivitsy izay anananao ao an-trano. Fanamarihana, baoritra taratasy fidiovana ary kahie sasany ihany no ilainao.
Kara-lolo sy lolo taratasy crepe
Ny iray amin'ireo asa tanana mora azon'ny ankizy azonao atao amin'ny baoritra kely, taratasy crepe, marika ary lakaoly dia ity lolo karda sy crepe taratasy milay be. Tsy maharitra ela ny fanamboarana azy ary avy hatrany dia hanana ravaka kely ianao handravahana ny efitranon'ny ankizy.
Raha te hahalala ny fomba hanaovana azy dia jereo amin'ny paositra Kara-lolo sy lolo taratasy crepe izay tonga dia hazavaina tsara tsikelikely.
Vilany mpikarakara pensilihazo ho an'ny ankizy
Ny ankizy dia mazàna manangona crayons, pensilihazo ary marika be dia be handoko fa amin'ny farany dia mandeha manodidina ny trano foana izy ireo. Mba hisorohana ny fahaverezan'ny very sy ny fananana ny sary hosodoko rehetra amin'ny toerana iray, andramo izao poti mpikarakara pensilihazo ho an'ny ankizy.
Ireto ny sasany amin'ireo asa tanana mora volo sy mahafinaritra indrindra azon'ny ankizy atao. Ho fanampin'izay, hahafahanao mamerina mamerina ireo akora efa anananao ao an-trano fa tsy manipy azy ireo.
Raha te hahalala ny fomba fanaovana an'ity asa tanana ity ianao dia aza adino ny lahatsoratra poti mpikarakara pensilihazo ho an'ny ankizy.
ireo sachet lamba handoroana ny arimoara Izy io dia iray amin'ireo asa tanana mora ho an'ny ankizy, ankoatry ny fanomezana fotoana tsara ho an'ny ankizy kely, dia ho toy ny mpanadio rivotra voajanahary ho an'ny akanjo koa, izay hisorohana ny akanjo tsy hahazo fofona sy hamandoana.
Izy ireo dia maro loko, azo ampiharina ary tonga lafatra amin'ny fanomezana. Amin'io tolakandro io ihany dia azonao atao ny manamboatra maromaro miaraka amin'ny lamba kely, voninkazo maina ary lavender na fotom-kanelina. Raha te hahalala ny ambiny amin'ireo fitaovana hanamboarana ity asa-tanana ity dia mamporisika anao aho hamaky ity lahatsoratra ity Kitapo lamba handoroana ditin-kazo manitra. Ho fahafinaretana ny manokatra ny kabinetra!
Tsinontsinona voaravaka amin'ny fahavaratra
Handravaka kiraro fotsy misy marika Io dia iray amin'ireo asa tanana mora tsara indrindra ho an'ny ankizy azonao atao. Azonao atao ny manampy ny ankizy kely hanao ny sarina famolavolana tsotra. Mila kiraro kiraro sy marika mena mena sy maitso roa fotsiny ianao.
Azonao atao ny manao ny volavolan'ny serizy na mampiasa ny eritreritrao ary mandoko ilay tianao indrindra. Ao amin'ny lahatsoratra Tsinontsinona voaravaka amin'ny fahavaratra ho hitanao ilay horonantsary hamerenana ity asa tanana ity. Aza adino izany!
Kilalao voaverina: ny sodina majika
Indraindray ny kilalao tsotra indrindra dia ireo izay tian'ny ankizy indrindra hanana fotoana mahafinaritra sy fialamboly. Toy izany ny Sodina sodina, iray amin'ireo asa tanana mora azon'ny ankizy azonao atao ao anatin'ny minitra vitsy.
Mba hanaovana io kilalao io dia azonao atao ny mampiasa fitaovana fanodinana izay anananao ao an-trano toy ny sasany mololo na mololo hitsentsitra soda. Ary raha tsy manana izany ianao dia afaka mahita azy ireo amin'ny fivarotana lehibe.
Ankoatry ny mololo dia mila kasety kely na kasety koa ianao. Safidy iray hafa ny lakaoly, fa raha afaka misafidy kasety ianao dia anolorako azy satria ho tsara kokoa io, mora kokoa ny manao azy ary azo antoka kokoa aza. Araka ny hitanao dia zavatra roa ihany no ilainao!
Saka mpiandry pensily
Raha tianao ny manodina, ny iray amin'ireo asa tanana mora azon'ny ankizy azonao atao dia ity saka mpihazona pensilihazo miaraka amina taratasy fidiam-baoritra misy anao ao an-trano. Ho an'ny ambiny, tsy mila fitaovana maro hafa ianao, afa-tsy ny mari-pamantarana sasany, ny hety, ny lakaoly kely ary ny mason'ny asa tanana.
Raha te hahafantatra ny fomba hanaovana an'ity saka mahafatifaty tsikelikely ity ianao dia aza hadino ny lahatsoratra Saka mpiandry pensily.
Este Andiana peratra Iray amin'ireo asa tanana mora azon'ny ankizy azonao atao amin'ny fitaovana anananao ao an-trano izany. Baoritra kely iray, horonam-baoritra misy taratasy an-dakozia, marika sy lakaoly dia ho ampy hanaovana ity lalao mahafinaritra ity izay ahafahanao milalao lalao ao anaty na ivelan'ny trano.
Te hahafantatra ny fomba anaovana io andiana peratra io ve ianao? Topazo maso ny lahatsoratra Andiana peratra izay ahitanao torolalana amin'ny antsipiriany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa-tanana ho an'ny ankizy » Asa-tanana 15 mora ho an'ny ankizy